VaMubayiwa naVaDube Vorwira Chigaro chaSachigaro wePSL
Masachigaro ezvikwata zvine mukurumbira cheDynamos necheHighlanders, VaKenny Mubaiwa naVaPeter Dube, vachange vachitungana neMugovera vachirwira kutungamira Premier Soccer League iyo yanga ichitungamirwa naVaTwine Phiri kwemakore mashanu apera.
Vemumhuri yeCastle Lager Premier Soccer League vari kusangana nemugovera kuitira kuti vasarudze sachigaro mutsva mushure mekusiiswa basa kwaVaTwine Phiri.
VaDube, avo vanga vari mutumevedzeri waVa Phiri, ndivo vanga vachifanotungamira PSL kubvira panguva iyo VaPhiri vakasiiswa basa neveZimbabwe Football Association mwedzi miviri yapera.
Aka kave kechipiri VaMubaiwa vachiedza kuda kutora chinzvimbo ichi mushure mekunge vakambokundwa zvinonyadzisa vaine mavhoti matatu chete kuna VaPhiri avo vaive nemavhoti gumi nemaviri.
Pamusoro pekutungamira zvikwata zvenhabvu, sachigaro wePremier Soccer League anogara zvekare muZifa board.
Asi veruzhinji havana hany'a nezvesarudzo iyi vakawanda vacho vachiti ivo pfungwa dzavo dziri mune zvinoitika munhandare kwete zvevatungamiri.
Chokwadi ndechekuti nyaya yanga ichingotarurwa nezvayo mumutambo wenhabvu ndeyemutambo uri kuBaborufields Stadium neSvondo apo zvikwata zvine mukurumbira muguta iri, Chicken Inn neHighlanders, zviri kubandana mumutambo weZimbabwe National Army Charities Shield.
Chicken Inn iri kubhebha moto mushure mekuonesa chitsvuku chikwata chekuSouth Africa cheMamelodi Sundowns zvekuti muteveri weCaps United, VaFarirayi Matamba, vanoti maGame Cocks akadzokorora zvavakaita kuSouth Africa, Highlanders haimire.
Pakapedzisira kutamba zvikwata izvi mufainari yeEasycall Cup, Highlanders yakakunda nechibodzwa chimwe chete zvekuti vaimbove muridzi wepembe muPremier Soccer League, VaSam Hamandawana, vanoti mutambo uyu uri kuratidza kuti uchanakidza zvakaipa
Vaimbove mutevedzeri wasachigaro weHighlanders, VaMgcini Mpofu, vanoti havasi kuverenga zviri kutaurwa neveruzhinji kuti Chicken Inn yakabaka vachiti ivo chinangwa chavo kutora mukombe uyu pamwe nekuwana mari yekushandisa mukutanga kwemwaka wegore rino.
Imwe kota fainrari yeZNA Charities Shield ichange iri muRufaro Stadium apo Harare City iri kusangana nemaGreen Machine eCaps United.
Harare City ichangobva mukudzoka kubva kumaMadagascar uko vakanoita mashiripiti nekurova AS Adema murairidzi wavo, Taurayi Mangwiro, achiti iye pamutambo neCaps United vari kutarisira kukunda zvevanongoda kuita pamitambo yese.
Caps United yacho zvekare yakatenga vatambi vatsva uye yanga iri kuMozambique uko yaive yaenda kugadziriro yemwaka uno zvekuti VaMatamba vanoti vakagadzirira zvakasimba mutambo neHarare City.
Vachatora mukombe uyu vachawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Vachakundwa mufainari vachiwana zviuru makumi mashanu emadhora.
ZPC Kariba yatove muma semi fainari mushure mekurova Dynamos 1-0 svondo rapera.